China HDPE orinasa mpamokatra fantsona gazy | Shengyang
Ny fantsom-panafody HDPE dia mateza sy azo antoka, ampiasaina amin'ny injenieran'ny etona an-tanàn-dehibe.
Life Ho ela velona
Fampiasana azo antoka mandritra ny 50 taona mahery.
Ny fantsom-pe dia manana elongation amin'ny fihenan'ny 500%. Tsy ho vaky izy io noho ny fanovana isan-karazany any ambanin'ny tany toa ny fidinana an-tany sy ny horohoron-tany, ary manana fiarovana azo antoka. Boribory boribory (R≥15D), tsy mila tonon-kiho, izay mety amin'ny fananganana.
◎ fanoherana mangatsiaka
Ny coefficient fitrandrahana tsipika an'ny fantsom-pe PE dia 1.5X10-4mm / mm ° C, ary ny halavany dia saika tsy voakasiky ny fiovan'ny mari-pana. Tsy misy fiovana ara-batana na dia amin'ny -80 ° C. Mety indrindra ho an'ny faritra mangatsiaka mafy izany.
Ny fantsom-pe dia azo ampiasaina amin'ny fusion elektrika na fifandraisana mafana. Ny fifandraisany dia feno, tery ary tsy hivoaka mihitsy.
◎ fanoherana fanoherana
Mandroboka asidra hydrochloric amin'ny hafanan'ny efitrano. Amin'ny asidra solifara (-70%), asidra azota (≤25%), asidra phosoratika, asidra hydrofluorika, asidra sarotra (-10%) ary vahaolana hafa dia tsy voakasik'izany ny fantsom-pe
◎ Ny masira Alkali sy ny anorganika
Ny fantsom-PE dia alentika amin'ny loko isan-karazany, sira tsy an-tongotra ary ranomasina amin'ny 60 ℃, ny pipa PE dia tsy hanimba.
Matter Zavatra voajanahary
Ny sodina PE dia mahazaka solvents biolojika toy ny hydrogen peroxide sy petrol methyl amin'ny maripana ara-dalàna, ary ny pipa PE dia tsy hanimba.
Ny fantsom-pe dia mavesatra maivana (1/7 fotsiny amin'ny fantsom-by) ary mahay miovaova tsara. De16-De75 fantsona azo maratra ho mora fitaterana sy fananganana.
Pipa Gaspeona Gastro Hdpe Tubing
Pipe Hdpe ho an'ny famatsian-gazy
Pipe Hdpe ho an'ny gazy
Sodina fitoviana polyethylene mahazaka hafanana miaraka ...
Sodina mihodina HDPE indroa rindrina